WOWOW Gold Pepa Towel Holder Wall Wall
musha / zvishongedzo / Bathroom accessories / WOWOW Goridhe Pepa Towel Holder Wall Mount
bronze goridhe chimbuzi mapepa anobata anoshandisa iyi nyowani madziro nzvimbo panguva yako imba ichiita kuti imba yako itaridzike yakawandisa.
Kuvaka kwesimbi yakasimba, sus304 haizoite ngura
Dhizaina dhizaini emhando yepamusoro, yakavanzika screws
Ronga uye uwedzere nhanho imwe yakapusa
Kupa zvemhando yekugadzirwa kwezvinhu uchishandisa iyo understated dhata, ichi goridhe chimbuzi mashini anobata 4020001BGD inokodzera pamwe nechimbuzi chako kuita fashoni inotsungirira. Bronze goridhe endini kupedzisa inopenya uye inodziya kune isina nguva.
Yakagadzirwa kubva ku304 premium-giredhi isina simbi, iine imwezve 18/10 chromium / nickel zvinhu zvekudzivirira kubva ngura & ngura.
Akavanzwa screws anombundira Germany Fischer nylon anchor bolt, hapana kukuvara kumadziro ako akaiswa, ari nyore kuisa, anogona kuturika zviri nyore newe pachimbuzi kushongedza (zvese zvinokwira Hardware zvinosanganisirwa); 3-gore rekuvimbisa
Mari inodhura-inotengesa - yakanakira mutengo wepamusoro-soro mhinduro, yakasarudzika sarudzo yako yekugezera.
Rakareruka kumisikidza, uye kukwidza Hardware kunosanganisirwa.
SKU: 4020001BGD Categories: zvishongedzo, Bathroom accessories Tags: Bathroom accessories, Bronze Goridhe, Wall Mount
WOWOW Faucet Kontakti Hesi
WOWOW Kicheni Faucet Sprayer Heads G1 / 2 Kubatanidza
WOWOW Hapana Drill Toilet Pepa Holder Akabhururuka Nickel